India: Tata, Jaguar ary Rover. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2018 15:47 GMT
Manontany tena i John Elliot ao amin'ny Ampitaingenana Elephant hoe raha to afaka hahatapaka tsingerina iray amin'ny fikororosian'ireo marika fiarakodia roa avo lenta ireo i Ratan Tata? Mihevitra i Elliot fa manana tombony amin'ny fanatsoahana an'io i Ratan Tata, saingy manontany tena izy mikasika ny hoe dia iza no handray ny fanodinana an'i Tata (70 taona) raha vao misintaka izy:
Truemors, blaogy iray an'ny Silicon Valley mandray fomba fijerinà namana sy feno vazivay momba ny nahazoan'i Tata ny Jaguar sy ny Land Rover. Andrasana ny hahatonga ny Jaguar ho fantatra amin'ny anarana ampitiavana hoe “ny havian'i Tata”, raha toa ny Land Rover, somary lehibe kokoa, handray ny andraikitra “havanan'i Tata”.
Mamintina ireo hevi-dehibe mikasika ilay fifampiraharahàna i Krishna Raj avy ao amin'ny My Capital Market Weblog ao anaty lahatsorany amin'ny blaoginy.
Manoratra i Gaurav Shukla ao amin'ny brandfaqs fa manana orinasa efa ho 98 ny Vondrona Tata ao anaty vàlany ary manome fijery tsara iray mikasika ireo orinasa goavana sasantsasany.
Manipika ny AutoPandit fa i Tata Motors ankehitriny no mpanamboatra fiarakodia manana marika avo lenta indrindra. Manipika i Nishant Kaushik fa 10 taona lasa izay, tsy re intsony ny karazan-javatra toy ny hoe orinasa Indiana nividy orinasa fanta-daza. Tsipihan'ny blaoginy hoe hatraiza no fetran'ny fiovàn'i India nanomboka tamin'izany.